स्वास्थ्य /जिबनशैली – Online Palanchok
खालि पेट हुदा खानपिनको अनियमितता नमिल्दा चिल्लो खाने कुरा बढी खादा ग्यास्टिकको समस्या बडि हुन्छ । धेरै व्यक्तिलाई ग्यास्ट्राइटिसको समस्याले सताएको हुन्छ । ग्यास्ट्राइटिस भएका मानिसहरुले एसिडिक खानेकुराको बढी प्रयोग गर्नुहुँदैन । जसमा कागती, सुन्तला, निबुवा, भोगटे आदि फल पर्छन् । यस्तो समस्या भएकालाई टमाटरले पनि थप असर पु९याउँछ । दूध र दूधजन्य पदार्थ पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या भएकाले यसको प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ । । दूधमा हुने प्रोटिनले पेटको भित्री भाग सुन्निने हुन्छ । यसका साथै यसले पेटमा एसिडको मात्रा बढाउँछ । यसका लागि दही फाइदाजनक हुन्छ । यसमा पाइने प्रोबायोटिकले भने रोगीलाई राहत प्रदान गर्छ । नियमित रूपमा मदिरा सेवन गर्दा पनि ग्यास्ट्राइटिसको असर झन् बढेर जान्छ । ग्यास्ट्राइटिसबाट पीडित मानिस चिया र कफीबाट पनि बच्नुपर्छ । यसले चियापत्ती र कफीमा हुने क्याफिनले ग्यास्ट्राइटिसको असरल
के तपाईँको कपाल झर्ने समस्या छ ? छ भने रोक्न बेलैमा अपनाउनुस् यी उपायहरु (भिडियो)
आफुलाई कसरी सुन्दर देखाउने भन्ने कौतुहलता केटीहरुमा अधिक रहेको हुन्छ। आफुलाई राम्रो, सुन्दर देखाउन केटीहरु अनेक उपायहरु अपनाउने गर्दछन्, त्यसमध्ये केटीहरुको केश, उनीहरुको एउटा अभिन्न सुन्दरताको भाग हो। कपाल लामो भएको सबै केटीहरुलाई मनपर्छ तर कपालको विभिन्न समस्याबाट अधिकांश समस्या झेल्नु पर्नेहुन्छ र परिरहन्छपनि। त्यसैले सुन्दर देख्न र लामो कपालकालागि बजारमा उपलब्ध विभिन्न लोशन, तेलहरु प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। तर आजकाल बजारमा आएका रसायनिक सामग्रीहरुले कपाल सपार्नुको सट्टा झन बिगारीरहेको छ। यसको मतलब बजारमा पाइने सबै कस्मेटिक सामान खराब होइन तर धेरैजसो सामग्रीले प्राकृतिक सुन्दरतालाई बिगारीरहको हुन्छ। कतिपय लोशन, तेलहरु त यतिसम्म हानिकारक शिद्ध भइदिन्छन् कि त्यसको प्रयोग पश्चात् हाम्रो केश झन् विग्रने, झर्ने हुन्छ, तर यसको मतलब यो हैन कि हरेक ब्यूटी टिप्स गलत हुन्, तर प्रयोग गर्नु
तौल घटाउने वा तौललाई नियन्त्रण गर्ने काम धेरै नै चुनौतिपूर्ण छ | खासगरी यस्ता मानिसको लागि जो खानामा नियन्त्रण गर्न सक्दैन | हामी धेरै नै तनाबपूर्ण तथा ब्यस्त जीवन निर्बाह गर्दछौं | जसको कारणले गर्दा शारीरिक ब्यायाम गर्नको लागि हामीसंग समय हुदैन | तौल घटाउने विभिन्न उपायहरु छन् | तर त्यसको लागि हामीले धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ | आज हामी तपाईलाई तौल घटाउने प्राकृतिक उपायबारे जानकारी दिन्छौ | जसले बिशेष रुपमा तपाईको पेटको तौल घटाउन मद्दत गर्दछ | र यसबाट तपाइको स्वास्थ्यमा पनि राम्रो असर पुग्दछ | यस विधिमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामाग्रीहरुमा पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रामा पाइने भएकोले यसले तपाइको पाचन प्रणालीमा सुधार ल्याई छिटो तौललाई घटाउन मद्दत गर्दछ | यस विधिलाई नियमित रुपमा प्रयोग गरेमा तपाइको तौल छिट्टै घटदछ | यस विधिमा मात्र ४ सामाग्रीहरु घ्यु कुमारी , कागती , अदुवा र महको प्रयोग
नाक चेक गर्न पुगेका बिरामीको नाक चेक गर्दा डाक्टरको उड्यो होस हेर्नुहोस (भिडियोसहित)
नाक चेक गर्न पुगेका बिरामीको नाक चेक गर्दा डाक्टरको उड्यो होस (भिडियोसहित)//सुरुमा नाक चिलाउने र पछि नाकबाट रगत नै बग्न थालेको समस्या लिएर अस्पताल पुगेका एक वृद्धको नाकले डाक्टरहरुलाई समेत झसँग बनायो । ब्राजिलको साओपाओलोस्थित क्लिनिक्स अस्पतालमा उपचारको लागि पुगेका ६५ वर्षका ती वृद्धको नाकमा १ सय भन्दा बढि झिँगाका लार्भा स्याउँस्याउँ गरेको देखेपछि सुरुमा त डाक्टरहरु पनि डराएछन् । नाकभित्र प्वाल नै थुनिने गरी किराहरु जम्मा भएको थाहा पाएपछि विरामी बुढाको होस ठेगान रहने कुरै भएन । केही समय पहिले नाकभित्रको ट्युमरको शल्यक्रिया समेत गराएका उनको नाक सुरुमा अलिअलि चिलाएको थियो । नाकको देब्रे पाखोमा दुख्ने, स्वास फेर्न पनि गाह्रो हुने, गन्हाउने र आँखासम्मै सुन्निएर नाकभित्रबाट रगत समेत बग्न थालेपछि उनी पुनः अस्पतालमा जँचाउन गए । अस्पतालमा गएर उनको नाकभित्र डाक्टरहरुले चेकजाँच गर्दा त उनको नाकमा
किड्नी मानव शरीरको निकै महत्वपूर्ण अंगमध्ये एक हो । यसले रगतलाई फिल्टर गरेर त्यसमा रहेका हानिकारक तत्वहरुलाई पिसाबको माध्यमबाट बाहिर पठाउने काम गर्छ । तर,हाम्रै लहपार्बाहीले पनि किड्नी खराब हुने गर्दछ । किड्नीमा असर हुुनुमा मानिसको लापरवाही मुख्य जिम्मेवार छन । के कारणले किड्नी बिग्रिन्छ जानीराख्नुहोस: १. चिसो सर्दी र चिसोको समस्या भइरहन्छ भने यसप्रति वेवास्ता नगर्नुहोस । चिसोले पोस्ट इन्फेक्टिभ ग्लोमेरोनेफ्राइटिस नामक रोग लाग्छ । यसले किड्नीमा व्याक्टेरिया उत्पन्न गर्छ । २. खानामा धेरै नून खाँदा वा अन्य नूनिलो खानेकुराले पनि किड्नी खराब बनाउँछ । नूनले सोडियम ब्लड प्रेसर गराउँछ, जसको असर किड्नीमा पर्छ ३. पिसाब रोक्दा पिसाव थैली भरिन्छ । पिसाब भरिएर किड्नीसम्म पुग्छ । पिसाबमा हुने व्याक्टेरियाले किड्नीलाई हानी गर्छ । ४. पानी कम वा ज्यादा पिउनु शरीरलाई दैनिक ८ देखि १० गिलास पा
गर्भावस्थामा यौनसम्पर्क कसरी राख्ने ? गर्भावस्थाका बेला यौन सम्पर्क गर्दा ख्याल राख्नैपर्ने कुराहरु
महिलाको पेटमा गर्भ बसेपछि गर्भको संकेतको रुपमा शुरूको अवस्थामा वाक्वाकी लाग्ने, खान मन नलाग्ने, रिँगटा लाग्ने, तल्लो पेट दुख्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन् । गर्भावस्था महिलाका लागि संवेदनशील अवस्था हो । यो अवस्थामा तनाव लिने, ठाउँ परिवर्तन गर्ने, गरूङ्गो भारी उठाउने र बढी यौन सम्पर्क गर्नाले पनि तल्लो पेट दुख्ने र रक्तश्राव हुने लक्षण देखा पर्छन् । कसै कसैलाई सामान्य अवस्थामा पनि रक्तश्राव हुनसक्छ । यस्ता लक्षण गर्भमा रहेको भ्रुणको विकास हुन नसक्दा पनि देखिने संभावना हुन्छ । पहिलो तीन महिनासम्म यस्तो वाकवाकी लाग्ने समस्या लगातारजस्तै हुनसक्छ । तीन महिनापछि यो समस्या आफैं बन्द भएर जान्छ । गर्भावस्थामा शरीरमा रहेका हर्मनमा परिवर्तन आउने हुनाले यस्ता लक्षण देखिने हो । यस्तो अवस्थामा गर्भ तुहिने खतरा पनि हुन्छ । गर्भवतीको सुजर गरिएको छ भने सामान्य समस्या ठीक भएर जान्छ । तर गर्भको ३८ हप्तापछि
महिनावारी हुदाँ मन्दिर प्रवेश गर्न हुन्छ ! के भन्छन् युवा ज्योतिष हरिहर अधिकारी (भिडियो)
काठमाडौं । महिनावारीलाई हिन्दु धर्मका विभिन्न कथाहरु सुनाइदा पापको रुपमा सुनाइन्छ। त्यसैले महिनावारी भएको महिला मन्दिर वा पूजा गर्ने ठाउँमा, भान्सामा, पवित्र स्थलमा जानु हुँदैन र पवित्र मानिने वस्तुहरु छुनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। युवा ज्योतिष हरिहर अधिकारिले भने यस विषयमा आफ्नो छुट्टै विचार राखेका छन्। उनका अनुसार महिनावारि बार्नु धर्मसंग होइन परम्परासंग जोडीएको छ। धर्ममा कतै पनि महिनावारीलाई पापको रुपमा व्याख्या नगरिएको उनी बताउँछन्। अधिकारी भन्छन्, 'मन्दिरहरु गाउँ देखि धेरै टाढा, जंगलमा बनाइने गरिन्थ्यो। महिलाहरु हरेक दिन मन्दिरमा पूजा गर्न जान्थे। महिनावारिको समयमा रगतको गन्ध छिटो थाहा पाउन सक्ने जनावरहरुले उनीहरुलाई आक्रमण गर्न थाले। जसले गर्दा महिनावारीको समयमा मन्दिर जान नहुने चलन एउटा घरले चलायो। त्यसलाई राम्रो मानेर अरुले पनि त्यही चलन अपनाउन थालेपछि त्यो परम्परा बन्यो।
जाडो मौसममा काजुको नियमित सेवन गर्दा हुने छ यस्ता आस्चर्यजनक फाईदा
काजुमा मोनो स्याचुरेटेड फ्याट हुन्छ, जसले मुटुलाई स्वस्थ राख्छ र मुटुरोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ । यो कोलेस्टेरोलरहित हुन्छ । छालाका लागि पनि काजुलाई दूधमा रगडेर लगाउनाले सुन्दर र नरम हुन्छ । काजुको नियमितसेवनले कपाल झर्नबाट रोक्छ । यसमा सोडियम कम र पोटासियम बढी हुन्छ, जसले रक्तचाप पनि कम गर्छ । काजुमा एन्टी अक्सिडेन्ट, जस्तै, भिटामिन इ र सेलनियमन पनि पाइन्छ, जसले क्यान्सरबाट बचाउँछ । यसमा हुने जिंकले संक्रमणविरुद्ध लड्न मद्धत गर्छ । काजुको सेवन प्राकृतिक रुपले डिप्रेसनको उपचार हो । काजुमा पाइने म्याग्नेसियमले शरीरमा सेरोटोनिनको स्तर बढाउँन मद्धत गर्छ । सेरोटोनिनलाई खुशी राख्ने रसायन भनिन्छ । यसका अलावा यो प्रोटीनको पनि राम्रो स्रोत हो । यसमा पाइने कपरले शरीरमा इन्जायमको गतिविधि, हार्मोनको उत्पादन, मष्तिष्कको कार्यमा मद्धत गर्छ । काजुमा एकप्रकारको तेल हुन्छ, यो भिटामिन बीको राम्रो
सेक्स गर्नुअघि यी खानेकुरा नखाएकै राम्रो , जसले बनाउँछ यौन जीवन नै पीडादायी
– सेक्समा लीन हुनअघि लसुन खानु हुदैन । यसले मुख र श्वासलाई दुर्गन्धित बनाउँछ, साथै पेट पनि फुलाउँछ । फुलेको पेट र दुर्गन्धित श्वासले सेक्सलाई आनन्ददायक बनाउन सक्दैन । – पनिर धेरैजनाको मनपर्ने खान्कीमा पर्छ । तर, सेक्सअघि यो पनि भरसक खानु हुँदैन । पनिरको स्वाद र गन्ध मुखमा लामो समयसम्म रहन्छ । यसले यौन उत्तेजनालाई शान्त गर्छ । त्यसैले सेक्सअघि पनिर खानु त्यति राम्रो मानिदैन । –रातो मासु हेभी डाइट हो । रातो मासु खाएपछि पच्न लामो समय लाग्छ । रेड मिट खाएपछि निन्द्रा लाग्छ, शरीर आलस्य हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सेक्स गर्नु त्यति आनन्ददायक हुदैन । –चिज पनि पच्न समय लाग्छ । यसले ग्यास बनाउने र पेट ढुस्स बनाउने गर्छ । यस्तो पेट सेक्समा लिन हुन उपयोगी हुँदैन । –चुइङ्गम खानाले मुख फ्रेस हुन्छ र यसले चुम्बनलाई भव्य बनाउन सहयोग गर्छ । तर, सेक्सका लागि चुइङ्गम चपाउनु राम्रो मानिँदैन । मायो क्लि
बिहानै खाली पेटमा दूध चिया नभई हुँदैन ? थाहापाउनुहोस् यस्ता छन् दुध चियाको असर (भिडियो)
काठमाडौँ । चिया धेरै नेपालीले पिउँने पेय पदार्थमा पर्छ । बिहान ओछ्यानमै चिया पिउने त नेपालीको चलन नै बनेको छ । कतिपय त चिया नपिई नित्यकर्म गर्न सक्दैनन् । अधिकांश नेपालीले बिहान चिया पिउँँछन् । के बिहान खाली पेटमा चिया पिउँनु राम्रो बानी हो रु बिभिन्न अनुसन्धानले खाली पेटमा चिया पिउदा स्वास्थ्यलाई धेरै हानी हुनसक्ने देखाएका छन् । चियामा कैफिन र टैनिन पाइन्छ जसले शरीरलाई उर्जा दिन्छ । चियामा दूध मिसाउदा चियामा पाइने एण्टिअक्सिडेन्ट नष्ट हुन्छ । चिया पिउँनुका फाइदा नभएका होइनन् । तर खाली पेटमा पिउने, धेरै पिउँने र धेरै गुलियो चिया पिउदा स्वास्थ्यलाई असर गर्छ। दूध चिया भन्दा कालो चियाले फाइदा गर्छ तर कालो चिया पनि धेरै पिउँँनु हुँदैन। खाली पेटमा दूध चिया पिउदा थकान बढ्ने, एसिडिटी बढ्ने हुन्छ । यसले पेटको अल्सर पनि हुनसक्छ। दिनमा ५ कप भन्दा बढी चिया पिउँने मानिसलाई प्रोस्टेट क्य